दोक्लम समस्या र नेपालमा त्यसको प्रभाव « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७४, मंगलवार ०६:४५
भू–राजनीतिका कारण नेपाल संवेदनशील अवस्थामा छ । यो दोक्लम भन्ने स्थानबाट नजिक पनि छ । त्यसकारण नेपाल विभिन्न चिन्ताहरूबाट गुज्रीरहेको छ । त्यसमा पनि मुख्यतया दुईवटा समस्या यसको सामु चुनौतिको रूपमा उभिएका छन् । नेपालको प्रथम समस्या आन्तरिक हो र दोस्रो बाह्य समस्या हो । जसलाई नेपाली सचेत नागरिक, सुरक्षाविद्, अर्थविद्, उद्योगपति, राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय, वौद्धिक तथा विषयगत विज्ञहरू र सञ्चार माध्यमहरूले राम्ररी बुझेका छन् ।
कोरियाली महाद्विप, मध्य एसिया तथा खाडी क्षेत्र, पश्चिमी मुलुकहरू र दक्षिण एसियाली क्षेत्रसमेत अशान्त छन् । यी क्षेत्रमा विभिन्न घटना भइरहेका छन् । खासगरी अहिले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा तनाव बढ्दो छ ।
हामीलाई स्मरण छ, खालिस्तानीहरूका विरुद्ध पञ्जाबको स्वर्णमन्दिरमा आक्रमण गर्न गोर्खा रेजिमेन्टलाई नै अगाडि सारिएको थियो । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा पनि सयौं गोर्खाली सैनिकले ज्यान गुमाएको इतिहास ताजै छ ।
आन्तरिक समस्या मूलत: २००७ सालदेखि अहिलेसम्म अस्थिरता र लम्बिदो संक्रमणकाल हो । जसले मुलुकलाई अविकास, गरिबी, द्वन्द्व, परनिर्भरता, शक्तिहीन, बेरोजगारी, बुद्धि एवं श्रम पलायन, भ्रष्टिकरण, कमजोर राजनीतिक दक्षताको नेतृत्त्व, गैरजिम्मेवार एवं भ्रष्ट प्रशासनिक नेतृत्त्व, आन्तरिक अविश्वास लगायतका समस्याहरूद्वारा ठूलो भिरतिर देशलाई नजानिँदो ढंगबाट धकेलिरहेको छ । आन्तरिक पक्षभित्र स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता तथा अक्षुण्णता, सार्वभौमिकता र स्वाधिनता पर्दछन् । जसको रक्षा, संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकास र विस्तार, मुलुकको शक्तिले गर्दछ । मुलुकको शक्तिभित्र– त्यो देशको जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक क्रियाकलाप तथा उद्योग, युवा जनशक्ति, विज्ञ जनशक्ति, सेना, प्रहरी, प्रशासन, अस्त्रशस्त्र, विज्ञान, प्रविधि आदि पर्दछन् । यी सबै कुरा चुस्तदुरुस्त राख्न सक्षम स्वार्थरहित, उच्च मनोवल भएको स्वाभिमान, नैतिकवान, राष्ट्रवादी, देशभक्त, राजनैतिक नेतृत्त्व वा सामुहिक शक्ति आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा यस्तो नेतृत्त्वको अभाव खड्किएकोमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । यस्तो नेतृत्त्वको खोजी आजको आवश्यकता भएको छ । यो दायित्त्वबाट नागरिक पनि पन्छिनु हुँदैन ।
यसरी जब आन्तरिक समस्या उत्पन्न हुन्छन्, त्यसले भयावह ढंगबाट वाह्य समस्याहरूलाई सिर्जना गर्ने गर्दछ । अत: ‘बाघले बाख्रा खानुअघि आफ्नो खोर बलियो बनाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।’ वर्तमान संगीन अवस्थामा शिघ्रातिशिघ्र आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधान गरी राष्ट्रिय सुरक्षा र शक्तिहरूको निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ । यसका लागि राष्ट्रिय शक्ति निश्चित दिशासहित केन्द्रिकृत र संगठित गर्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ भने अर्काेतिर विकास निर्माण, हकअधिकार जस्ता पक्षहरूलाई नागरिक तहसम्म पुर्‍याउन विकासको विकेन्द्रीकरण मोडेल अहिलेको नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो जस्तो भूराजनीति अवस्थामा रहेको मुलुकले अत्यन्त सुझबुझका साथ आन्तरिक मजबुत र स्थायी राजनीतिक प्रणालीको स्थापना र विकास तथा बाह्य सम्बन्धलाई कुटनीतिक रूपमा कायम राख्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको अधिकतम् उपयोगद्वारा हित प्राप्त गर्न अत्यन्त चनाखो हुनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
पछिल्लो दशकदेखि जसरी हामी परराष्ट्रनीति तथा कुटनीतिमा कमजोर हुँदै गएका छौं, त्यसरी नै वाह्य समस्या पनि चुनौतिपूर्ण, डरलाग्दो र जोखिमपूर्ण हुँदै गएको देखिन्छ । विश्व परिघटना र समिकरण बद्लिदो छ । हाम्रा छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरूमा दुई पक्षीय र बहुपक्षीय टकरावको स्थिति छ । कोरियाली महाद्विप, मध्य एसिया तथा खाडी क्षेत्र, पश्चिमी मुलुकहरू र दक्षिण एसियाली क्षेत्रसमेत अशान्त छन् । यी क्षेत्रमा विभिन्न घटना भइरहेका छन् । खासगरी अहिले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा तनाव बढ्दो छ । भारत–पाकिस्तानबीच तनाव, अफगानिस्तानमा नेटो सेनाको उपस्थिति र यसमा पश्चिमा देश तथा चिनिया रुची, अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको (२०१७ जुन) चीन–भारत बीचको ‘दोक्लम’ सैन्य टकराव वा युद्धको स्थिति हाम्रा लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्दै गएको छ ।
दोक्लम घटना के हो ?
‘दोक्लाम’ भुटान र चीनको सीमा क्षेत्रमा पर्ने स्थानको नाम हो । भुटानको बाराहोतीदेखि उत्तर दिशातिर पर्ने चिकन लेक क्षेत्रमा पर्ने भू–भाग हो । यस क्षेत्रमा निनिया सेनाहरूले सडक निर्माण गरिरहेको भनिन्छ । जसलाई उनीहरू आफ्नो भूमि भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । निनिया सेनाको उपस्थिति छ र त्यही क्षेत्रमा भुटानको सीमा सुरक्षार्थ भन्दै भारतीय सेना तैनाथ गरिएको छ । अचम्म लाग्छ कि चीन र भुटानको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा भारतीय सैन्य उपस्थिति कसरी भइरहेको छ ? भुटान सानो देश हो । सन् १९४९–२००७ लगायत त्यसपछिका सम्झौता र आपसी सम्बन्धहरूका कारणले भूटान भारतको सुरक्षा प्रणालीभित्र रहेको छ । यही सुरक्षा परराष्ट्रनीति तथा व्यापारिक सन्धि सम्झौताका कारण भारतीय सेना उपस्थित हुनसक्ने आधार भएकै हुँदा उसको उपस्थिति त्यति अचम्मको भने छैन । भुटानको संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच भिटो राष्ट्रहरूसँग कुनै दौत्य सम्बन्ध रहेको छैन । यी सबै कारणले भारतसँग सुरक्षा सहयोग माग्न सक्ने र उसको उपस्थितिलाई स्वीकार्नु पर्ने तथा भारतको दक्षिण एसियामा बढ्दो शक्ति प्रदर्शनले होला, त्यहाँ भारतीय सेनाको उपस्थिति रहेको छ । दोक्लममा भारत र चीनका सैनिकबीच चरम टकरावको स्थिति अघि बढेको अवस्था छ । दुवै देशका सरकार, विज्ञ, तथा मिडियामा सुरक्षा र युद्धको भाषा प्रयोग भइरहेको छ । उनीहरू आमनेसामनेको अवस्थामा छन् । मिडियामा शक्ति प्रदर्शन गरिँदैछ । त्यहाँ तनाव र युद्धको जटिल अवस्था छ । यस क्षेत्रमा तनाव र युद्धको स्थिति बढ्दै गएको छ । यही भारत र चीनबीचको सैन्य तनावलाई नै दोक्लम घटना भनिएको हो । जुन आजभोलि बढी चर्चामा छ । चिन र भारतबीचका द्विपक्षीय वार्ताहरू असफल हुँदै गएको अवस्था छ । दुवै देशबीच असमझदारी तथा दूरी बढिरहेको देखिन्छ ।
भारत र चीनबीचको यो तनाव र टकरावबाट नेपाललाई तत्काल वा दीर्घकालीन रूपमा पर्ने प्रभावबारे यो लेखमा विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ ।
१) नेपालको सीमामा रहेका भारत र चीन दुवै शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र हुन् । तर पनि नेपाललाई कसैको पक्ष वा विपक्षमा वकालत गर्न प्रयत्न गरिने छ । विभिन्न अबाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने गराउने सम्भावना पनि रहने छ । असंलग्न पराराष्ट्र नीतिलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिने छ । यतिवेला स्वाधिन राष्ट्रको मर्म र धर्मअनुसार सरकारले तटस्थ भूमिकामा रहेर शान्तिपूर्ण समाधानको माध्यम र वार्ताबाट सो समस्या हल गर्ने, सल्लाह प्रदान गर्नु, त्यसमा आफ्नो मत राख्नु र त्यस्तो प्रयत्न गर्नु उत्तम विकल्प हुने छ । कथंकदाचित अप्रिय घटना भएछ भने त्यसका नकारात्मक प्रभावका साथै सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधिनता बचाउन सक्नु नेपालको लागि पहिलो कर्तव्य र चुनौति हुने छ ।
२) दोक्लममा तैनाथ गरिएका भारतीय सेनाको विभिन्न रेजिमेन्टमध्ये अग्रम मोर्चामा रहेर लड्न खटाइएको गोर्खा रेजिमेन्टका सेनाहरूको संख्या पनि ठूलै छ । भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीको संख्या करिब चालिस हजार जति छ । जसमध्ये अहिले चिकन लेक दोक्लाममा मात्र चार सयदेखि छ सय गोर्खा सैनिक तैनाथ गरिएको रक्षाविद्हरूको अनुमान छ । यदि युद्ध वा युद्धजन्य घटना भएमा ती सैनिकको क्षति हुँदा समेत सोच्नै नसकिने दु:खद् अवस्था नेपालीहरूले बेहोर्नु पर्नेछ । हामीलाई स्मरण छ, खालिस्तानीहरूका विरुद्ध पञ्जाबको स्वर्णमन्दिरमा आक्रमण गर्न गोर्खा रेजिमेन्टलाई नै अगाडि सारिएको थियो । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा पनि सयौं गोर्खाली सैनिकले ज्यान गुमाएको इतिहास ताजै छ ।
३) नेपालीहरूको दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने वस्तुको आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने छ । भारतबाट आपूर्ति भइरहेका दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्य, औषधि, तेल, ग्यास (इन्धन) आदिको आपूर्ति ठप्प हुने छ । यसले नेपालको दैनिक जीवन तथा विकासलाई ठूलो प्रभाव पार्ने छ । ऊ आफै युद्धको एक कर्ता भएको कारण आफ्ना सम्पूर्ण मानव एवं भौतिक साधनस्रोत त्यतैतिर लगाउने छ । त्यति बेला न ऊ आपूर्ति गर्न बाध्य हुने छ न हामी नै बाध्य पार्न सक्ने छौं । यसैगरी चीन पनि ठिक यही स्थिति र भूमिकामा रहने छ । यसरी नेपाललाई आपूर्तिको दृष्टिकोणले पनि ठूलो प्रभाव पर्ने छ ।
४) छिमेकी भू–राजनीति अवस्थामा रहेको नेपाल युद्धमार्ग बन्ने पनि सम्भावना रहनेछ । नेपालको आकाश तथा भूमि प्रयोग हुने जस्ता तमाम युद्धका प्रभाव पर्ने छन् । ती प्रभावले भयानक खतराको संकेत गर्दछ । मिस–फायर गर्ने र नक्कली युद्ध गर्ने वा हुने अवस्थालाई पनि दृष्टिगत गर्नु आवश्यक हुनेछ । यसो भएमा नेपालमा अति नकारात्मक प्रभावहरू पर्नेछन् । यसबाट हुने अकल्पनीय क्षतिको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यस सम्भावनालाई ध्यानमा राखी अगाडिदेखि नै कुटनीतिक सुरक्षाको तयारी अनिवार्य हुन आउँछ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
५) नेपालसँग भारत र चीनको सीमा जोडिएको छ । दोक्लाम घटना हेर्दा यस्ता जोडिएका सीमाहरूमा युद्धको बढि प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । अझ, नेपालको भूमिलाई उनीहरूले क्रिडास्थल बनाउन सक्ने तितो सम्भावनालाई पनि बिर्सन सकिदैन । राजा महेन्द्रले भारतले नेपालको उत्तरी सिमामा राखेका अरू चेकपोष्टहरू हटाइरहँदा नेपालको भूमिमा रहेको लिपुलेकको पोष्ट सन् १९६२ मा यथावत राख्न दिँदाको परिणाम आज हामी भोगिरहेका छौं । त्यही लिपियाधुरामा भारतले आफ्नो सेना तैनाथ गरेको छ । चीन र भारतले नेपालकै भूमिमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई द्विपक्षीय व्यापार तथा धार्मिक हितका लागि भनेर बैठक गरेको धेरै भएको छैन । यो घटनामा नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया नआउनु लज्जाको कुरा थियो । भुटान भारतको सुरक्षा विदेश नीति र अर्थनीतिमा अधिनस्थ भए झैं नेपाल कसैको अधिनस्थ राष्ट्र होइन । यी दुई देशको ऐतिहासिक पृष्टभूमि पनि फरक छ । यो कुरा चीन र भारतले बुझेका छन्, तर पनि उनीहरूको त्यस्ता सामरिक महत्त्वको भूमिको प्रयोग गर्ने हुँदा यसतर्फ पनि सरकार तथा देशभक्त नेपालीहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
६) यस घटनाक्रमको प्रभाव चीन र भारतसँग मात्र सम्बन्धित रहने छैन । यसले सिंगो दक्षिण एसिया र यसका सीमावर्ति क्षेत्रमा बढी प्रभाव पार्ने छ र विशषगरी नेपालमा बढि पर्ने छ । शक्ति तथा युद्ध उन्मादमा छिमेकी राष्ट्रका सीमाहरूमा शक्तिको प्रयोग गरी आततायीपूर्ण कार्य, सीमा अतिक्रमण, हत्याहिंसा आदि समस्या सिर्जना गरिने यस्तो युद्धको बेलामा ठूलो सम्बन्ध रहन्छ । नेपालको दक्षिण सीमा अत्यन्त असुरक्षित छ ।
नेपालको सीमा दक्षिण तिर ९८ स्थानमा (मेची–महाकाली) मिचिएको छ । नो म्यान्स ल्याण्डमा समेत सयौं स्थानमा सडक, बाँध, तटबन्ध आदि निर्माण गरिएका छन् । दर्जनौ सिमास्तम्भ (जंगेपिलर) गायव गरिएका छन् । एकलौटी रूपमा सीमास्तम्भ खडा गरिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूमाथि हरेक दिन हिंसा, अपमान, कुटपिट, अपराध, हत्या (गोविन्द गौतम, कञ्चनपुर) जस्ता जघन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित कार्य पुँजीवादी पश्चिमी राष्ट्रहरूको आडमा गर्ने गरेको छ । यो युद्धले सीमा क्षेत्रमा यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने छ, जसले नेपालको सार्वभौकिता तथा अखण्डतामाथि ठूलो खतरा उत्पन्न हुनेछ । पाकिस्तान, नेपाल र भुटानका सीमाहरू अति असुरक्षित र सैन्य तथा युद्धतर्फ उद्धत छन् । के कमजोर राष्ट्रहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिदै त छैन ? भन्ने आशंका स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न भएको छ ।
यी र यस्ता तमाम प्रभावहरू ‘दोक्लाम’ एवं त्यो प्रकृतिका घटनाले नेपालमा पार्ने छन् । त्यस्ता प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्न सफल कुटनीति नै प्रमुख अस्त्र हो । कुटनीतिलाई नै प्रमुख अस्त्र बनाउनु पर्छ । क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको अधिकतम प्रयोग हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्दछ । हामीले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका सबै देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध, वार्ता, भ्रमण, समझदारी र जीवन्त रूपमा सम्बन्ध कायम गर्नु उचित हुनेछ । हाललाई नेपालको दृष्टिकोण मौन तटस्थ र स्पष्ट बनाइ राख्नुपर्छ । साथै राष्ट्रिय एकता, शक्ति निर्माण, विकासका साथै सुरक्षा शक्ति विकासमा समेत ध्यान पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो ।